Teknolojiyadda goynta - AOOD Technology Limited
Teknoolojiyadda goynta ayaa had iyo jeer ah udub dhexaadka horumarka AOOD tan iyo markii aan aasaasnay. Waxaan leenahay tikniyoolajiyad giraanta silsiladda korantada si aan u xallino dhibaatooyinka gudbinta korontada ee nidaamyada kala duwan. Waxaan sidoo kale ku biirin karnaa isku -xireyaasha wareega fiber -optic / coax si aan u siino macaamiisheena xallinta is -beddelka oo dhammaystiran oo leh hufnaan iyo isku -halayn ugu habboon.
20kii sano ee la soo dhaafey, waxaan fiiro gaar ah siineynaa baahida loo qabo faraantiga siibidda ee codsiyada heer-sare ah. Xagga difaaca, waxaan si karti leh u xamili karnaa kumanaan awoodood oo sarreeya iyo wareegyo xog ah oo ku yaal meel aad u xaddidan, oo aan hubinno in siddooyinkan silbashadu ay lahaan doonaan waxqabad sare iyo isku -halayn jawi adag. Waxaan xitaa soo saarnay silsilado silsilado kaabsal yar oo milateri ah si aan ula kulanno calaamadda dhinacyo badan leh iyo baahida gudbinta xogta meel aad u xaddidan. Xagga berriga, waxaan ku siin karnaa cutubyada giraanta silsiladda ROV ee isku-dhafan oo leh isgoysyada wareega fiber-optic iyo kala-goysyada dareeraha, oo lagu daboolay IP68 iyo saliid laga buuxiyey qaliinka subsea. Xagga caafimaadka, siddooyinkeenna suufka canjeelada ee weyn ee loogu talagalay iskaan-baarayaasha CT-ga ayaa bixin kara ilaa 2.7m iyada oo loo marayo gudbinta xogta xawaaraha sare leh ee aan la xiriirin> 5Gbits.